महासय! त्यो केटी कसले बिहे गर्छ?
यमुना अर्याल (काफ्ले) print
‘त्यो केटी मेरो छोराको लागि कुनै हालतमा सुहाउँदैन, मैले हुँदैन भनेपछि हुँदैन हुँदैन .....’
सहकर्मी साथीको दाइको बिहेको कुरा चल्दै थियो बुवा एकाएक जंगिन थाले। ‘बिहे गर्ने मैले हो ड्याड मलाई मनपरेपछि सक्किहाल्यो नि, तपाईको लागि बिहे गर्दिन लाग्या हो र?’ छोराको डाँको पनि ठूलै आयो। बाबुछोराको गल्फती चलिरहँदा आमाले सम्झाइन्, ‘छोराले मन पराएकी केटी ठिकै छ भने कुरा अगाडि बढाऔँ न किन तातो रिस गर्ने, वैशाखको पहिलो लगनमा बिहे गरौँला।’
रिस मत्थर नभएका श्रीमानले खुसुक्क श्रीमतीलाई एकान्तमा बोलाए र सम्झाउन थाले, ‘हेर त्यो केटी त मेरो अफिसको हाकिमकी रखौल जस्तै बनेकी रहिछे, मैले अस्तिमात्र थाहा पाएको। हाम्रो छोराको जिन्दगी वर्वाद हुँदैन? यता छोरासँग लभ गर्ने उता हाकिमसँग बाहिर बाहिर घुम्न जाने। एक महिना पहिले क्याम्पसको फिल्डवर्क भन्दै त्यो केटी हाम्रो हाकिमको गाडीमा बसेर झापातिर एक साता घुमेर आइ, एक सातासँग एउटी छोरीमान्छे के सोचेर घुम्न सक्छे विचार गर त? त्यो हाकिमले बाँकी राख्या छ त्यो नकचरीलाई? हाकिमको फेसबुकमा दुई जनाका तालतालका फोटा देखेपछि बल्ल चाल पाएको। यस्ता अर्काले चाखिसकेकी बेइज्जती, चरित्रहिन केटीलाई बुहारी बनाउँदा भोलि हाम्रो इज्जत के होला? मेरो अफिसका सबै स्टाफलाई थाहा छ त्यो केटी र हाकिमको चर्तिकला। हाकिम्नी कति सोझी छन् बिचरी बुढाको अझै तरूनी घुमाउने रहर पुग्या छैन। दुनियासँग जे पनि गर्दै हिड्ने रूपले झलझली बलेकी छ भन्दैमा हुन्छ? सम्झाउ आफ्नो छोरालाई।’
अब आमा पनि गम खान पुगिन्। थुइक्क गतिछाडा केटी, यस्ता केटीले गर्दा इमान्दार केटीलाई पनि बिक्न गाह्रो बनाउने भए। पोहोर आफ्नी छोरीको बिहे गर्दाचाँही खुब इज्जतिलो ज्वाँइ खोजेको हाकिम अहिले अर्काकी बिहे गर्ने उमेर भएकी छोरी लिएर जवानीको तल्तल मेटाउँदै छ थुइक्क हाकिम बुवाले हाकिमलाई दुत्कारे।
सबै कुरा सुनेपछि दाइ पो छाँगाबाट खसेजस्तो भए, आफूले जीवन काट्ने बाचा गरेकी आफ्नै उमेरकी हुनेवाली श्रीमती बुवाको हाकिमसँग सात दिनसम्म घुम्न गइ रे?‘थुइक्क तेरो इज्जत? अब तँलाइ कसैले बिहे नगरोस् जवानी हुन्जेलसम्म मस्ती गर्दै हिड् छाला चाउरी परेपछि थाहा पाउँछेस् मेरो चोखो मायाको चोट।’
यो घटनाले भित्रभित्रै घोँचिरहेको थियो। आजकालका युवतीहरू के भएका होलान्? फेरि पिण्ड खाने बेलाका लोग्नेमान्छेहरू नि? सोच्न पनि घिन लाग्ने छिछि कस्तो सोँच, कस्तो मनस्थिति आफ्नी छोरीलाई लक्ष्मण रेखाको बाँध लगाउने अरुका छोरीहरु चहार्दै हिड्ने।
केही समयअघि चार जना साथी मिलेर नगरकोट घुम्न गएका थियौँ। काठमाडौंबाट नजिकै भए पनि हाम्रो लागि नगरकोट नौलो थियो, यताउति घुम्दै तालतालका फोटो खिच्नमा मस्त हामीले कसैको मतलव राखेका थिएनौँ। नगरकोटबाट देखिने राजधानी शहरका दृष्यजस्तै हामी पनि कताकता हराएका थियौँ। डाँडा घुमिसकेपछि थकाइ मार्न होटल भएको स्थानमा पुग्यौँ। होटलमा आउँदै थियौ, एक जना मित्रले चिल्लो कार हुँइकिदै होटलको अगाडि आएको देखिहालिन्, ‘ओइ हेर न चिल्लो कारमा त एउटा बुढोबुढो मान्छेसँग हिरोइन आकी छ त!’
साथीको कुरामा हामी तीन जनाले चाख दिएर हेर्‍यौ। नेपालका नाम चलेका प्रतिष्ठित एक जना व्यापारीले नाम चलेकै हिरोइन कारमा हालेर लगेका रहेछन्। ‘हरे शिव, यत्रो विजनेश्म्यानले हिरोइन ल्याएर आ‘को होटल होटल’ अरू दुई जना साथीले जिब्रो टोके। टक्क कालो चश्मा लगाएका ती महासयको मुहारको चमक त चम्किएकै थियो, स्टेट कपाल सर्लक्क पछाडि पारेर मुसार्दै अघि ल्याउँदै चश्माले अड्याउँदै गरेकी हिरोइन पात्रको चमकढमक पनि कम थिएन। राजा चिनाइजस्तो भयो हाम्रो चिनाइ पनि हामीले उनीहरूलाई चिनिहाल्यौँ हामलाई कसले चिनोस्?
हामी बाहिर बसेर हेरिरह्यौँ, उनीहरु भित्र बसे केके खाए अनि होटलको कोठातिर लागे। होटलको गार्डलाई सानो स्वरमा सोध्यौ, ‘ए दाइ अघि कारमा यहाँ आएका को हुन चिन्नु भा छ?’ हाम्रो प्रश्नमा गार्ड दाइले फ्याट्टै जवाफ फर्काए , ‘ए उहाँहरु त हाम्रो पुरानो ग्राहक हो।’
हिरोइन चाँही अविवाहित थिइन् त्यो बेलासम्म कही मिडियामा उनको बिहे भएको खबर आएको थिएन, उनलाई पत्रपत्रिका र फिल्मका पर्दामा देखेकोले हामीलाई चिन्न कठिन परेन। हिरोइनलाई लगेर जाने व्यवसायी त झन ठूलै खानदानका व्यक्ति उनलाई नचिन्ने सायद को होला र?
आफैंले चिनेका दुई पात्र बाबुसमानको लोग्नेमान्छेले छोरी समानकी युवती लिएर मुड फ्रेस बनाउन होटलमा लिएर गएको आफ्नै आँखाले देख्दाचाँही अक्क न बक्क भइयो।
गार्ड दाइलाई फेरि सानो स्वरमा सोध्यौँ, ‘ए दाइ यीनीहरू राति पनि यही बस्छन्?’ गार्ड दाइले हामीलाई बच्चाजस्तै गरी थर्काए, ‘ए बहिनीहरू तपाई बच्चै हुनुहुन्छ, अझै यस्ता कुरा थाहा पाउने बेला भा’छैन । मैले मेरा छोरीहरूलाई कति अनुशासनमा राख्छु घरमा, आफनै श्रीमतीलाई यसो गर्न हुन्छ उसो गर्नु हुँदैन भन्छु म आफैं सीमा नाघ्दिनँ तर के गर्नू? यहाँ जोडी भन्दै कस्ता कस्ता आउँछन्? सबैलाई स्यालुट ठोक्नैपर्छ, धेरैजसो चिनेकै अनुहार पटकपटक दोहोरिन्छन्। आफूलाई मनमा थाहा छ नि तर के गर्नू? मनको बह कसैलाई नकह भनेजस्तै गर्नुपर्छ। रातिमा नबस्ने भए त किन यत्रो खर्च गर्नको लागि उति टाढाबाट यहाँसम्म आउनुपथ्र्यो त? तपाईँहरू आफैं बुझ्नोस त।’गार्ड दाइको कुराले सोच्न बाध्य बनायो ।
एउटी बिहे नगरेकी युवतीलाई पैसावाल लोग्नेमान्छे पाएपछि अरु केही चाहिदो रहेनछ न परिवार, आफन्त न त इज्जतको डर नै लाग्दो रहेछ। ती महासयले आफ्नी छोरीलाई कति संस्कारका कुरा सिकाउँदा हुन्, यस्तो गर्नुहुन्छ उस्तो गर्नुहुँदैन भनेर कति चरित्रका कुरा फलाक्दा हुन्। आफ्नी श्रीमतीलाई तैँले यसो गर्नुहुन्छ यसो गरिस् भने इज्जत जान्छ, इज्जतमा बस्नुपर्छ, अरूले कुरा काट्ने काम गर्नुहुँदैन भनेर कति थर्काउँदा हुन्। उफ कसरी सोच्ने यस्ता कुरा? लोग्नेमान्छेको इज्जत कहाँ जान्छ र भन्छ हाम्रो समाज, हो सायद त्यही भएर होला यी महासयले ढुक्कसँग हिरोइन लिएर नगरकोटका होटलसम्म पुगेका।
कामकाजी मान्छेलाई कति सजिलो छ कता हो? भनेर परिवारले सोधीखोजी गर्दा अफिसको कामले मिटिङमा छु, आज घर आउन ढिलो हुन्छ खाना खाएर सुत्नु भनिदिएपछि पुगिहाल्यो। अझ अलि ढिलो फोन गरेर आज मेरो अफिसको काम ढिलोसम्म हुनेभयो घर आउन नसक्ने भएँ भनेपछि घरका आफन्तले सोधीखोजी गर्ने कुरा पनि भएन।
बाउआमाले शहरमा पढ्न पठाएकी छोरी कहाँ के गर्दैछे, कसरी बसेकी छ, पैसा कसरी कमाउछे भन्ने कुराको अतोपतो हुँदैन। आफ्नी छोरी पैसावालसँग इज्जत बेचेर पैसा कमाएकी छ कि श्रम पसिना बगाएर कमाएकी छ गाउँमा रहेका सोझा बाआमालाई के थाहा? छोरीले पैसा पठाउँछे भन्नेहरू बिचरा सोझा बाआमा त्यसै दंग पर्छन्।
अहिले त कलेजका विद्यार्थीसमेत होटल बुक गर्ने भन्दै हिँडेका समाचारहरु पढ्न पाइन्छ। पुरूष महासय तपाईका छोरीहरु संस्कारी बन्नुपर्ने, इज्जतमा बस्नुपर्ने , इज्जतको सीमा पार गर्न नहुने तपाईँलाई ज्वाइ पनि त्यस्तै संस्कार भएको चाहिने तर तपाईँहरूले एउटा कुरा कहिल्यै याद गर्नु भएन आफूलाई आफ्ना छोरी संस्कारी भएको हेर्न मन छ भने नातिनी, छोरी समानका अर्काका छोरीको इज्जत लुटेर के आनन्द लिनुहुन्छ? तपाईलाई संस्कारी इज्जतको ज्वाइ चाहिन्छ भने सम्झनुहोस् तपाई त्यो कोटामा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न? आफूसँग पैसा छ भनेपछि जे पनि गर्न हुने तपाईहरू सधैभरी दुधले नुहाएको बन्नुपर्ने तर तपाईले गरेको काम तपाईका छोराले दोहोर्‍यायो भने त्यसलाई बदनाम भएको ठान्ने? तपाईले अरूका छोरीलाई होटल बुक गरीगरी खनखनी पैसा तिरेर उसको शरीरमा हालीमुहाली गर्न हुने तपाईँकी छोरीको कसैसँग अफेयर चल्यो भने पनि उसलाई तथानाम गर्ने? इज्जत फाल्न आँटिस्, भोलि समाजले के भन्ला भन्दै यसलाई थर्काउन , दवाउन खोज्ने?
पहिले आफू सुध्रिनुपर्छ महासय भाषण र गन्थन त कति गर्न सकिन्छ कति। हिजो तपाईँले पैसा तिरेर नगरकोटको होटलमा रात कटाएकी युवती यदि तपाईँकी छोरी हुन्थिन् र अरू तपाईजस्तै पुरुष पात्रले त्यसो गरेको हुन्थ्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? तपाईलाई पिर हुन्थ्यो अब तपाईकी छोरीको कौमार्य कसैले भंग गर्दिसक्यो, कसैले थाहा पायो भने छोरीको बिहे हुँदैन। आफन्तले थाहा पाए भने थुक्छन्, यस्ती, उस्ती भन्छन् छोरी बिकाउनै सकस पर्थ्यो तपाईलाई तर कति ढुक्कसँग आफ्नै छोरी समानकी युवती लिएर मुड फ्रेसमा निक्कनु भा को महासय?
दोष तपाईको मात्र कहाँ हो र? तपाईसँग टाँसिएपछि पैसा ओइरिन्छ भन्ने ती रूपवती हिरोइनको पनि अपेक्षा हो नि। उमेरले अलि फड्को मारेको भए पनि सबै कुराको मेन्टेन गरेर होला भर्खर बीस बाइस वर्षकी जस्तै देखिन्थिन् ती युवती । तिम्रा चिल्ला पुक्क परेका गाला, पुष्ट छाति, खाइलाग्दो जवानी सधैभरी कहाँ एकैनास रहन्छ र दिदी? अहिले तिम्रो रूप त्यसै पनि दिपजस्तै बल्ने बेला हो त्यसै राम्री छौं आज व्यापारीसँग गयौ भोलि अर्को पैसावाल मुर्गा भेटिहाल्छौ नि। तर, तिमीले पैसाको खातिर गुमाएको इज्जत एकपटक सम्झ त? भोलि तिम्रो बिहेवारीको कुरा आउला केटाले कस्तो चरित्र भएकी केटी हो भन्ला त्यो बेलामा अहिले जो जससँग मस्ती गरेर पैसा कमाएकी छौ सबैभन्दा पहिले उनीहरूले नै तिम्रा कुरा काट्ने छन्। तिमीलाई चरित्रहिन गतिछाडा केटीको संज्ञा दिनेछन् किनकी चरित्रवान र लक्षणकी छोरी त तिम्रो अस्मिता लुटेर आनन्द लिनेहरुका मात्र हुन्छन्।
त्यही होटलको गार्डले उहाँहरु त पुरानो ग्राहक हो भनेपछि अरु बोल्ने बाटो बन्द भयो हाम्रो। हामी चारजना केटीहरु जाँदा आँखा तर्नेहरु पनि देखियो सायद उनीहरुले सोचेहोलान , केटीमात्रै आएका रहेछन् केटाहरू नलिइकन भनेर। हामी त बस नगरकोटको रमाइलो हेर्न गएका थियौँ तर नौटकीहरुको रमाइलो पनि देखियो। आफन्त भेटिहाले अफिसको कामले आएको अफिसको स्टाफ हो भन्ने अरुसँग के मतलव भयो र भन्नेखालकाहरू नै घरका जोडी छाडेर पैसा तिरेका जोडीहरु बनेर धेरै जाँदा रहेछन् भन्ने कुरा गार्ड दाइले नै सुनाए। देख्दा बाउछोरी जस्तो लाग्छ तर के भन्नु र खोइ... भनेजस्तै। मलाई यस्ता युवती देखेर आक्रोस भन्दा पनि दया लाग्छ। अनि यस्ता महासयहरु देखेर ... के भन्ने कुनै शब्दै छैन। साँच्ची तपाईँले होटलमा रात कटाएकी केटीलाई कस्ले बिहे गर्छ? जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण ७, २०७३ १०:३०:५५